यो वैज्ञानिक सबैभन्दा महत्वपूर्ण जगिङ धेरै प्रभावकारी छ कि सिद्ध छ, र - शरीर बलियो र यसलाई सुधार गर्न, साथै अनुमति एक प्रकारले निःशुल्क र उपलब्ध वजन। उहाँले धेरै अंगहरु र हाम्रो शरीर को प्रणाली सकारात्मक प्रभाव छ।
ढिलो, अनिरंतर जगिङ कुनै पनि उमेर मा देखाइयो। साथै, तिनीहरूले वर्ष को कुनै पनि समय र लगभग कुनै पनि मौसम मा अभ्यास गर्न सकिन्छ। शरीर को कार्यक्षमता सुधार, यो पूर्ण रूपमा यो बलियो र मुश्किल बनाउने quenches छ। केवल एक रन मद्दतले दैनिक जीवनमा आवश्यक दिर्घकालिन गतिविधि र मोटर सीप हुन सक्छ।
चलान मार्फत प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ नतिजा आधारमा, तपाईँ तिनीहरूलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ साँझ र बिहान। बिहान चलान, सुतेपछि सकृय हुनेछ मांसपेशी टोन दिन र पुरा दिन को लागि एक सकारात्मक भावनात्मक शुल्क दिनुहोस्। साथै, बिहान जगिङ सबै काम सुरु हुन्छ, पाचन प्रणाली बढावा महत्वपूर्ण अंगहरु। र साँझ गरेको रन धन्यवाद, तपाईं सजिलै दिन भर संचित छ कि तनाव को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एक बलियो र स्वस्थ रात गरेको सो योगदान पुग्छ।
तर चालु गरिरहेको र सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न, क्रममा, तपाईं मुख्य नियम सम्झना गर्न आवश्यक - "। सुनको मतलब" को छैन लामो जगिङ इच्छित परिणाम दिन छैन, र तपाईंले पनि लामो छ भने, यो सम्भव सकारात्मक प्रभाव हासिल गर्न, पूर्ण गतिविधिको लागि आवश्यक जो आफ्नो प्रणाली, को शरीर थकान र निराशा कार्यहरु को सट्टा छ। लगभग 30 मिनेट जगिंग लागि इष्टतम समय।
चलाउन र के कसरी सही दौड को प्रकार वहाँ? सामान्य रन अलग्गै, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका छन्।
उदाहरणका लागि, सिढी चलिरहेको लामो स्वर र सुन्दर आंकडा सुधार गर्न प्रभावकारी माध्यम रूपमा लोकप्रियता प्राप्त गरेका छन्। तिनीहरूलाई मा पक्रने, तपाईं उत्कृष्ट रूप मा खुट्टा, चाक र एब्स ल्याउन, र आफ्नो हृदय प्रणाली कहिल्यै दुर्घटनामा हुनेछ। भन्न यस्तो अध्ययन र धन्यवाद श्वसन प्रणाली। आखिर, धेरै पटक तपाईं प्रत्येक सिढी चढाई गर्दा सास को shortness नोटिस थियो। प्राय सिढी जगिंग भने, सफा र मात्रा मा वृद्धि हुनेछ गर्न सजिलो।
चालु अर्को कुनै कम उपयोगी प्रकार - को भार संग चलिरहेको। तर यो बित्तिकै व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई लागि डिजाइन गरिएको छ। को संकेतक भार धेरै पटक राम्रो हुनेछ बिना गर्दा यस्तो आखिर, यदि धावक राम्रो परिणाम देखाउँछ। को भार को भूमिका शरीर (खुट्टा, हतियार, कमर) को विभिन्न भागहरु मा राखिएको एक झोला वा केही वजन संग dumbbells, र विशेष संलग्नहरू रूपमा बोक्न सक्छ। साईट धावक वा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धिहरू जगिंग कसलाई लागि ती, भार एजेन्ट आवश्यक छैन, तिनीहरूले एक धेरै ठूलो अतिरिक्त बोझ दिन रूपमा छन्। तर superfluous किलोग्राम यस्तो उपकरणहरू को छुटकारा प्राप्त गर्न - यो आवश्यक के छ। तर पहिलो सत्र तिनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। यस्तो घुँडा र को जोइन्टहरूमा क्षति रूपमा - प्रशिक्षण वजन को सुरुमा मात्र newcomers हानि पुर्याउन सक्छ गोलीगाँठो। र भार विभिन्न प्रकारका प्रयोग एक महत्वपूर्ण नियम: बिस्तारै आफ्नो वजन वृद्धि, प्रणालीबद्ध चलाउनुहोस्।
(एक ढिलो गति मा एरोबिक जगिङ एक प्रकार) जगिंग एरोबिक (सबै भन्दा वजन लागि प्रभावकारी), anaerobic (को प्रवेग), fartlek (एक रन समयमा गति र गति परिवर्तन), सजिलो fartlek र: त्यहाँ जात को विभिन्न प्रकार हो स्प्रिन्ट चलिरहेको। कुनै पनि अवस्थामा, यस्तो प्रशिक्षण चलिरहेको प्रकार बिना आफ्नो शरीर तपाईं विशेषज्ञहरु को सिफारिसहरू पालन यदि एक विशाल पक्षमा ल्याउन सक्छ। चालु - र स्वस्थ रहन!
प्रयोगशाला Invitro - विरामीहरु र चिकित्सा राय को समीक्षा
कसरी घर मा शरीर rejuvenate गर्न?
इस्राएलका लेकिमिया उपचार
एक जना महिला र एक पुरुषको गर्दनमा कसरी मुर्खाहरू हटाउन सकिन्छ?
को "पाहुना हास्य क्लब» (हास्य क्लब)
Vasiliy Peskov: जीवन र कार्य
कसरी सिक्नु हुन्छ केटाले के परिवर्तन गर्दछ?
कसरी चिसो कोठामा न्यानो राख्न